Isikhululo seenqwelomoya esidumileyo eHawaii sifumana iqeshiso elandisiweyo kubomi basekuhlaleni
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Isikhululo seenqwelomoya esidumileyo eHawaii sifumana iqeshiso elandisiweyo kubomi basekuhlaleni
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ukonwatyiswa • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Amagqwetha alwela ukonga i-Dillingham Airfield, isikhululo seenqwelomoya esithandwayo ngokubanzi kumantla oNxweme lwase-Oahu, babhiyozela uloyiso olukhulu kwidabi elaliqhuba ixesha elide xa iSebe lezoThutho laseHawaii lisirhoxisile isaziso salo sokuphelisa ukuqeshisa, nge-31 kaDisemba, yomhlaba ovela kumkhosi wase-US.
IKawaihapai Airfield e-Oahu, eHawaii, ekwabizwa ngokuba yiDillingham Airfield yindawo ethandwayo yabakhenkethi.
Ibala lomoya i-Dillingham, elisetyenziselwa ukukhwela i-glider, ukuhamba ngesibhakabhaka kunye nezifundo zokubhabha, kuphantsi kwesoyikiso sokuvalwa.
Isiphumo esitsha sithenga ixesha elininzi-iminyaka kuneenyanga-ukulungisa isicwangciso sekamva lesikhululo seenqwelomoya.
Abanini beeNqwelo moya kunye noMbutho wabaqhubi beenqwelo moya (AOPA) Ukuxhaswa kwenkxaso yeDillingham Airfield (ekwabizwa ngokuba yiKawaihāpai Airfield) kwakamsinya nje emva kokuba iDOTI yaseHawaii iqinisekisile kwi-AOPA ngo-Epreli 2020 ukuba izakuhamba iyekise ukuqeshiswa kwayo kwipropathi yesikhululo senqwelomoya kuMkhosi wase-US ngaphambi komhla wokuphela we-2024.
Umbuso waseHawaii uyalele abaqeshi ukuba baphume kwisikhululo seenqwelomoya esetyenziselwa uqeqesho ngenqwelomoya, ukuhamba esibhakabhakeni, ukubona indawo, kunye nokuqhuba iindiza, bebeka amashishini kunye nemithombo yokhenketho emngciphekweni.
I-AOPA UMphathi weSithili seNtshona ye-Pacific uMelissa McCaffrey ukhokele iinzame zombutho "zokuxhasa iqela lase-A" lokucela inkxaso yendawo, ukunceda ukwakha iphulo eliphambili, eliphambili elithe lafumana inkxaso phakathi kwabenzi bomthetho kwaye lajoyinwa ngabantu abangaphezulu kwama-450, bafumana umvuzo weendaba wasekuhlaleni. khupha. Phakathi kwabo baxhasi, uMmeli wase-US u-Kai Kahele (D-Hawaii) ubongoze u-Gov. David Ige ukuba agcine ukusetyenziswa komkhosi webala-moya ngo-Matshi 3 ileta.
UKahele usincomile isigqibo se-DOT (esabhengezwa nge-17 kaSeptemba ileta) yokurhoxisa injongo yokupheliswa kwangoko kwesiqeshiso somhlaba kwingxelo ecatshulwe kwimithombo yeendaba yasekuhlaleni malunga nophuhliso:
Isigqibo se-DOT saseHawaii sokurhoxisa isaziso sokupheliswa kwexesha lokuqala komkhosi kunye noMkhosi sivumela ukuqhubeka kwengxoxo efunekayo malunga nekamva leKharafihāpai (Dillingham). Ukusukela oko ndangena e-ofisini, mna nabasebenzi bam senze inzame zokufumana izisombululo zexesha elide zolondolozo kunye nokusebenza ukwandisa amandla eKawaihāpai, utshilo uKahele.
"I-Airfield ibaluleke kakhulu kumqhubi woqoqosho kuMantla oNxweme kwaye isebenza njengeziko lemfundo kwabo banqwenela ukuba ngabaqhubi beenqwelomoya kunye nokuhamba ngenqwelomoya ngokubanzi, kunye noluntu olusbhakabhaka."
Amagqwetha kaRhulumente nawo ajoyine lo myalelo wokulondolozwa, esenza umthetho oyilwayo ofumene inkxaso eqinileyo evela kwi-AOPA eyathethwa nguMcCaffrey kubungqina obunikwe ngoFebruwari, esenza ityala lokusetyenziswa kwesikhululo seenqwelomoya ngokubonelela ngeedola ezizizigidi ezili-12.6 kwisibonelelo sezoqoqosho ngqo kwaye etsala malunga ne-50,000 130 yeendwendwe unyaka ngelixa kuqeshwe abantu abali-11 kumashishini asekwe kwisikhululo seenqwelomoya ali-XNUMX.
The FAA Ukwabongoze urhulumente ukuba acinge kwakhona ngokugxotha abaqeshi beDillingham Airfield kwileta ka-1 kuFebruwari eya kumagosa kwisikhululo seenqwelomoya, ebiza urhulumente ukuba ahlehlise ukupheliswa kwengqesho kaJulayi 30 nokukhumbuza ilizwe ngezibophelelo zesibonelelo. I-AOPA isebenze ngokusondeleyo no-Sen. Gil Riviere (D-District 23) kunye no-Rep. ULauren Matsumoto (R-District 45), United States Parachute Association, kunye neenkokheli zeqela labameli basekuhlaleni i-Save Dillingham Airfield ukucenga i-DOT ukwandisa ukusetyenziswa kukaDillingham njengesixhobo seenqwelomoya. Iqela elikhulayo labaxhasi laphoxeka xa ukupheliswa kwengqeshiso kwe-30 kaJuni kwandisiwe de kwangoDisemba, kodwa kwagcinwa uxinzelelo kwixesha elininzi lokuphucula isisombululo sexesha elide.
NgokukaMcCaffrey, “Esi siphumo sokupheliswa kwangoko kwesivumelwano sokuqeshisa eDillingham (Kawaihapai) Ibala lomoya kunika abathathi-nxaxheba ithuba elihle lokufumana izisombululo kwiingxaki ezikhoyo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, kuvula ucango lokuseka isiseko seGA edlamkileyo nekhulayo. uluntu kwiminyaka ezayo. ”
I-Dillingham Airfield ineengcambu zasemkhosini, ebizwa ngokuba yi-Mokuleia Airstrip xa yayisakhiwa yi-US Army ishumi leminyaka phambi koDisemba 7, 1941, ehlasela iPearl Harbour, xa abaqhubi beenqwelomoya abambalwa abavela kumkhosi wenqwelomoya waseNorth Shore babenakho ukumilisela kwaye bajongane nolo hlaselo. Umgaqo weenqwelo-moya waphinda wandiswa, kwaye ibala lomoya labizwa ngokuba yi-Dillingham Air Force Base ngo-1948 ngembeko ka-Capt uHenry Dillingham, umqhubi wenqwelo-moya u-B-29 owabulawa ngexesha leMfazwe yesibini (II) yeHlabathi.